CATALOG OF KU XOORTAY UBAXYADA BEERTA - HIBISCUS
Nidaamka ku haboon iyo isku dhafka dhirta kala duwan ayaa kaalin muhiim ah ka qaadanaya qaabaynta muuqaalka beerta. Xirmooyin ubax ah oo si habboon loo xushay beerta ayaa ku farxi doonta isha waxayna ku qurxin doontaa guga ilaa dayrta goor dambe. Iyadoo gacan ka geysanaya ku xoortay geedihii, waad kala duwanaan kartaa beerta beerta, u qeybi dhulka iyo ku dar muqaal cusub. Marka aad dooranayso warshad, dhererkeeda, muddada ubax iyo dabeecadaha beeritaanka geedaha waa in la tixgeliyaa. Codsashada beeraleyda waa xoortay ubaxyada guga, sida ay ubaxday meesha ay ubaxday, halka dhirta kale ay toosan yihiin.
Inta badan marka la doorto geedaha waxay ku xiran tahay oo kaliya ma aha doorashada ee beerta, laakiin sidoo kale on dabeecada ee ciidda, cimilada iyo dhirta in horey u sii kordhaya on goobta.
Quince Japanese (henomeles)
Quince Japanese wuxuu loola jeedaa xoortay geedo ubaxsan. Geedkan kulaylka ah wuxuu jecel yahay gobollada leh jawi khafiif ah, laakiin wuxuu u dulqaadan karaa dhirjirta ilaa -30 ° C. Xayawaanka jinka qurxinta ee Japan waxaa loo isticmaalaa cawska iyo xuduudaha.
Ma taqaanaa? Gaar ahaan waxaad badanaa heli kartaa noocyada qallalan ee fiiqan kuwaas oo gaar ahaan loogu talagalay dhagaxyada iyo buuraha alpine. Waxaa sidoo kale jira foomamka hybrid ah ee bonsai sii kordhaya.
Japan iyo Shiinaha ayaa loo tixgeliyaa goobaha dhalashada ee quince. Heerka dhirtu waa 1 mitir, iftiin-u baahan oo aan dalbanaynin ciidda. Caleemaha iyo laamaha ee noocyo badan oo hybrid leh laamo, laakiin waxaad ka heli kartaa quince ah iyo laamo la qaawan. Nidaamka asaasiga ah waa mid awood leh, oo leh tubo dheer, kaas oo u oggolaanaya in ay si caadi ah u dulqaadato abaarta. Shrub iftiin-u baahan, sidaas darteed waxaa fiican in la beero meelaha nalalka iftiin leh. Ubax ilaa 5 cm dhexdhexaad ah, oo la dhajiyay dhererka dhirta oo idil, tufaaxa si adag u cadaadi qadhaadhaa saaxiib. Cunnuunka Japan quince ee May-June, muddada ubax waa 30 maalmood. Inta lagu jiro muddadan, geedaha waxay leeyihiin muuqaal qurxoon oo qurux badan oo noqda dheriga ugu weyn ee beerta.
Cagaarka miraha wuxuu bilaabmaa 3-4 sano. Miraha waxay u bislaadaan bisha Sibteembar-Oktoobar, waxay leeyihiin qaab pear ah, laakiin marar badan waxay u egyihiin tufaaxa cagaaran ama midab-cufan.
Buddley wuxuu ku koraa waddamada ciriiriga ah ee Aasiya, Koonfurta Afrika iyo Ameerika. Inkasta oo ay jeceshahay jawi diiran diiran, waxay u adkeysan kartaa heerkulka ilaa -20 ° C. Xilliga jiilaalka, qaybta kor ku xusan ee caleemaha soo baxay, laakiin sanadka soo socda caleemaha cusub ku koraan ilaa 1.5 m dhererka. Laamuhu waa cagaar, dhuuban, dherer. Dhirta caleenta, midab madow, ilaa 25 cm dheer. Ubaxku wuxuu noqon karaa midab, cad, dhar guduudan, kuna xiran nooca buddley. In daryeelka ee baadiyaha aan qabyo ahayn. Maalmaha qallalan, waa in la waraabiyaa oo la quudiyo inta lagu jiro muddada ubax. Ka hor inta jiilaalka, caleenta caleenta iyo caleemaha waa in la gooyaa, ciidda waa in lagu daboolaa peat iyo caleemo qallalan. Buddleya faafin by abuur ama gooyn.
Weigela waa geed ka timid qoyska Honeysuckle. Wadankeena, weigela waxaa la helaa waqti hore, wacan, iyo Middendorf. Xoortay ubaxu laba jeer sanadkii: laga bilaabo Maajo ilaa bartamihii Juun iyo dhammaadkii Agoosto ilaa horraanta Oktoobar. Inta lagu jiro ubax, weigela waxaa si weyn loogu daboolay ubax. Waxay jeceshahay meelaha qorraxdu ka baxdo ama wax yar yar.
Waa muhiim! Ubaxyada iyo caleenta weigela waxay ku dhaawacmi karaan dabaysha, sidaa daraadeed waxa ugu fiican in la beero geedaha meelaha la ilaaliyo.
Daryeelka dukaanka waa mid sahlan. Caleenta barafka leh waa in la gooyaa, la waraabiyaa maalmo qallalan iyo bacrinimo inta lagu jiro ubax. Dooro ciid dabacsan oo miro leh si loo beerto.
Heather caadi ahaan waxaa laga heli karaa sirqoollada beerta. Tani waa geed yar oo leh caleemo tetrahedral ah. Waxay ku koreysaa ilaa 1 mitir oo dherer ah. Heather waxay leedahay noocyo badan oo kala duwan midabka caleemaha iyo ubaxa. Ubaxa dhirbaaxo-qaabeeya qaababka jilicsan. Heather Blooms ee July iyo August iyo isha lagu hayo ubaxyo jilicsan ilaa dayrta goor dambe, sidaa daraadeed waxaa loo tixgeliyaa geed lagu beerayo xilliga dayrta. Wuxuu jecel yahay carrada dufanka, qorraxda iyo hooska qayb ahaan. Waa inay ahaato waraabin badan marka heather Blooms. Gobollada woqooyiga, halkaas oo ay madawayaashu yihiin kuwo barafoobay, waxay u baahan tahay in la waraabiyo si aad u badan ka hor ciidda barafka iyo hoyga loogu talagalay jiilaalka. Waxay fiicnaan doontaa haddii aad ku sameysid cayayaan leh caleemo la jajabiyey jilif, balka ama cirbadaha.
Meelaha la faafiyo. Si arrintan loo sameeyo, ka hor jarista, xulo laanta ugu dheer oo u diyaari dhulka, iyada oo la raacayo pin. Dhowr bilood ka dib, heather yar ayaa si taxadar leh loo qodaa oo loo beddelaa meesha la doortay.
Badan ee loo isticmaalo naqshadaynta muuqaalka muuqaalka. Tani waa geedo dilaacsan oo leh caleemo dheer (waxay gaari kartaa 2 mitir). Caleemaha dillaaca ama curl, abuurista xayawaan ubax ah. Ubaxyada waxay u egtahay jeex ah waxaana lagu qabanqaabiyaa stem dheer aan ka ahayn axils of caleemaha of 1-3 gogo '. Midabka ubaxa ee barafka-caddaan ilaa caleemaha cagaaran, buluug, lilac, iyadoo ku xiran noocyada bindweed. Buunshuhu wuxuu u baahan yahay daryeel la'aan oo u dulqaadanayo abaar iyo dhaxan caadi ahaan. Laakiin haddii aad siiso isaga oo waraabiyo oo quudiyo, waxaad ku heli kartaa ubax geedka oo dhan xilliga xagaaga.
Ma taqaanaa? Bindweeds waxay u baahan tahay in la sii wado fogaanta dhirta ee xaafadda 20-25 cm, iyo inta u dhaxaysa ay duurka u jiraan waa inay ahaataa 40-60 cm loogu talagalay buuxinta ciidda.
Bindweeds jajabiyey oo keliya oo keliya caawinta abuurka. Ka hor inta beerto, waa in la gooyaa oo la beeray geedo horeba loo diyaariyey.
Hibiscus waxaa iska leh qoyska Malvaceae. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa sida korka Shiinaha.
Inkasta oo ay ku badan yihiin noocyada hibiscus, dhammaantood waxay leeyihiin muuqaalada guud. Caleemaha geedku wuxuu ciribtiray, gaabiyey. Ubaxa - waa mid ballaaran, fudud ama dhirta, buluug, jaalle, jaale, casaan mugdi ah, lilac, iyo guduud iyo guduud. Waxaa jira ubaxyo leh xudduud u dhow hareeraha. Miraha foomka shan sanduuq oo leh miraha. Si hibiscus caadi ahaan dareemaan, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u dabacsan ciidda, ka saar haramaha iyo dhuuban ka duurka oo aad u adag. Laga bilaabo bisha Juun ilaa dayrta, labo jeer bishiiba waa inaad quudiso. Xayawaanku waxay ku faafeen adigoo qallajinaya, gooyo, gooyn ama miraha.
Hortensia - geed geed quruxsan oo qurxoon ama geedka yar leh oo leh inflorescences weyn oo dhalaalaya. Waxay u dhigantaa qoysaska Hortensia waxayna leeyihiin qiyaastii 70 - 80 nooc. Leaves waa oval, waaweyn. Nidaamka midabku waa kala duwan yahay: caddaan, kareema, casaan, mugdi madow, buluug iyo casaan. Inflorescences waxay leedahay qaabka dalladda, duufaanka ama kubbadda. Miraha foomka sanduuq kaas oo ay jiraan abuur yar. Goobta dhuxusha waxay gaadhaysaa 3 mitir oo dherer ah waxayna leedahay qaab wareegsan. Daryeelka dukaanka waa mid sahlan. Waxay u baahan tahay waraabin biyo diirran, quudinta dayrta, diyaarinta dhaxan.
Jasmine Garden, ama chubushnik badanaa laga helo beeraha magaalooyinka iyo beeraha. Bannaanka u badan ayaa u isticmaala sida dusha sare. Dhoobo leh caleemo yaryar, khafiif ah afkoda iyo ubax yar yar. Jasiiradda beerta - warshad iftiin leh. Hooska, ubaxu wuxuu noqon doonaa mid yaryar, oo laamuhu waxay bilaabi doonaan in ay fidiyaan. Miraha - sanduuqyo yaryar oo leh wareegyo yaryar. Chubushnik waxay ku kala duwan tahay iska caabinta barafowga waxayna u dulqaadataa abaarta caadiga ah. Jasmine Blooms laga bilaabo dabayaaqadii May ilaa August.
Silverweed waa dherer hoose ilaa 1,5 m dhererka. Ubax xooggan oo leh midabo kala duwan: casaan, caddaan, kareem, orange iyo jaalle. Ubaxyada waxaa lagu soo uruuriyaa ubaxyada-argagaxa leh ee dhirta ah ee qurxinta geedka laga bilaabo Maajo ilaa Sebtembar. Dhamaan noocyada Potentilla waxay jecel yihiin meelo iftiin leh. Carrada ayaa ku habboon dabacsan, nafaqo leh, wax yar oo acid ah. Carrabka lo'da waxaa la door bidaa kaliya Arctic.
Cudurka Camellia waxaa ka mid ah ilaa 80 nooc, kuwaas oo ay ku jiraan xoortay geedaha iyo geedaha. Caleemaha duugoobay waa quruxda kala duwan. Waxay yihiin oval-qaabeeya, calaamadaysan, duleelay saldhigga. Camellia Blooms 2-3 sano ka dib markii la beero. Ubaxyo kala duwan. Ubax kastaa wax bilaash ah kuma dhaco illaa bil. On this ubax buqsho cajiib ah muuqan at dhamaadka caleemaha. Camellia waa geed aad u culus, sidaas darteed, si aad u kobciso qorshaha, waxaad u baahan doontaa waayo-aragnimo iyo aqoon badan oo ku saabsan beeraha beeraha iyo beeritaanka dalagga. Buunshaha waxaa lagu faafiyaa by gooyn ee caleemaha ee sanadka hadda la soo xulay.
Magnolia - geedo qoyan oo qoyan ama qoyan. Waxaa badanaa loo sameeyaa si khaas ah ama si joogta ah. Ubax geedo waaweyn, kareysa, cadaan ama kareem, hal mar. Petals waxay ku taallaa 2-4 lugood. Miraha waa buug-gacmeed buunshaha leh miraha yaryar ee qaabka madow iyo saddex geesood.
Ma taqaanaa? Magnolia ubaxyo beerto pollinate sababtoo ah waxay Bloom ka hor inta bees iyo dhicin u muuqdaan. Inkastoo aysan jirin nectar ubaxyada, waxay soo jiidanayaan caraf udgoon macaan.
Magnolia wuxuu jecel yahay waraabin badan oo joogto ah, iyo sidoo kale ciidda la miiray.
Lilac waa caleemo qoyan oo reer Maslin ah. Caleenta lilac waa ka soo horjeeda, inta badan oo dhan, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa pin-kala go'ay, hoos u dhacaya jiilaalka. Ubaxyada, waxay kuxirantahay noocyada, cad, dhar guduudan ama casaan ah, oo lagu soo ururiyey panicles, kuwaas oo soo afjaraya laamaha. Calyx ee ubaxa waa yar yar oo gaaban, oo lagu daboolay qaabka afarta xabo. A corolla oo leh tubbo dhaadheer oo dheer (marmar dhif ah, Amur lilac - oo leh tuubo gaaban) iyo qadar afar qaybood ah. Miro waa sanduuq qallalan oo qalalan. Waxaa jira noocyo badan oo lilac ah, laakiin lilac caadi ahaan waa caadi. Waa mid aad u adag oo adkaysi u ah cudurrada iyo cayayaanka.
Spiraea waxaa iska leh qoyska Rosy. Blade Spirea wuxuu bilaabmaa horraanta Maajo. Ubaxku waa yar yahay, oo leh fiilooyin dheer oo ah stamens, oo ay ugu mahadcelinayaan taas oo ay noqdaan kuwo qalafsan. Ubaxyo la uruuriyey ee pyramidal, thyroid ama mawduuca-qaabeeya. Midabka wuxuu ku xiran yahay noocyada kala duwan waxayna kala duwanaan kartaa caddaan ilaa casaan. Inta lagu jiro ubax, geedku wuxuu u eg yahay daruuro jilicsan oo u mahadcelisey dad badan oo ubaxyada, laantu waxay qaadataa qaab muuqaal ah. Wixii koritaanka geedaha ornamental ku haboon ciidda bacrin ah oo dabacsan, meel fiican oo iftiin leh iyada oo aan la joogin biyaha iyo quudinta saddex jeer maalintii.
Rhododendron - mid ka mid ah geedaha ubaxyada ugu quruxda badan, kaas oo laga heli karaa beeraha iyo beeraha. Goynta ama shimbiraha - xilliga gu'ga waxay gabi ahaanba ku aaseen ubax waxayna ku farxaan isha cagaarka caleenta. Caleemaha waxay ku kala duwan yihiin cabbirka iyo qaabka, sessile ama petioles, bedelka, oo dhan, marar dhif ah, maqaayad, iwm. Ubax ballaaran oo aan caadi ahayn oo aan midab lahayn, midab jaalle ah ama midab casaan ah ayaa lagu ururiyaa burushka ama inflorescence ee qaabka glandular. Miraha waa sanduuq shan-laab ah oo leh miraha.
Rhododendron waxaa lagu kori karaa meel kasta oo ka mid ah. Waa wax aan qabyo ahayn oo sahlan oo lagu hayo. Waa in lagu waraabiyaa 2-3 jeer toddobaadkii, hawo qalalan iyo kulul, buufin caleemaha. Laakiin waxaa haboon in la xusuusto in aysan suurtagal ahayn in la dabciyo ciidda agagaarka geed, sababtoo ah xididdadu waxay ku dhow yihiin dusha.
Forcisia waxaa iska leh qoyska Aasiyada, blooms guga hore leh ubaxyo huruud ah dhalaalaya. Forsythia baadiyaha ilaa saddex mitir sare. Jirka ayaa leh midab adag iyo midab-bunni-cawlan. Caleemaha waa mid fudud, inkasta oo noocyada qaar ka mid ah, iyo ternate. Ubaxa foomka of dawanno dhalaalaya huruud ah. Buundada ayaa ubaxyada hore ee beerta iyo ubaxyada ilaa saddex toddobaad. Miro waa sanduuq ay ku jiraan miraha geedka.
Waa muhiim! Si aad u beerto forsythia waxaad u baahan tahay inaad doorato meel wanaagsan oo iftiin leh leh ciid beedh. Waxaa ugu wanaagsan in la beero meel u dhow beeraleyda, halkaas oo ay si qurux badan uga soo horjeedaan asalkooda.
Forsythia waxaa lagu beeray jidadka magaalooyinka, garoomada iyo beeraha. Waxay ku jirtaa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya oo u sheega qof kasta oo ku saabsan imaanshaha guga. Xilliga dayrta, caleemaha cagaaran ee forsythia soo leexday dahab ama midab-violet, oo mar kale soo jiidashada leh leh ololka cirifka dhalaalaya. Buunshuhu waa sahlan tahay in la nadiifiyo oo la adkeeyo.
Waxaa fiican inaad ku beeri ku xoortay geedaha ku xiran xaaladaha cimilada, nooca carrada iyo muddada ubax ee la doonayo. Haddii aad bixiso taxaddar taxaddar leh oo ku saabsan daryeelka dhirta, waxay ku farxi doonaan xilliga oo dhan ubax leh ubaxyo qurux badan oo ubax leh oo qurxin doona beertaada.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Hibiscus 2019